February 22, 2020 - MM Live News
သင်သိရင် သင်ချမ်းသာလာလိမ့်မယ် မြေခွေးတစ်ကောင်ဟာ ကြက်ခြံတစ်ခြံကိုတွေ့တော့ခြံထဲကိုဝင်ပြီး ကြက်ခိုးစားဖို့ ကြံစီတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ခန္တာကိုယ်က ဝလွန်းတာကြောင့် ခြံထဲကို တိုးဝင်လို့ မရဘူး….. ဘယ်လိုရှာရှာ တိုးတိုး မရတာနဲ့ အစာငတ်ခံတဲ့နည်းကိုသုံးပြီး ၃ရက် အငတ်ခံပြီးကိုယ်လုံးသေးသွားတော့မှ ခြံထဲကို တိုးဝင်လို့ရသွားရော …. ဒါပေမဲ့ ကြက်တွေ ကိုခိုးစားလို့ ဝပြီး ပြန်ထွက်မယ်လုပ်တော့ ပြန်ဝနေတာနဲ့ ထွက်လို့ မရတော့ပြန်ဘူး ဖြစ်နေရော… ဒါနဲ့ နောက်သုံးရက် အစာအငတ်ခံ တော့မှပဲ ကြက်ခြံထဲကပြန်ထွက်လာလို့ ရလာတော့တယ်…. နောက်ဆုံးတော့ မြေခွေး လည်းစဉ်းစားမိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တုံးအ မှု့ကြောင့် ကိုယ့်အခြေအနေ ကို ကိုယ်ပြောင်းလဲနေမိတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ဘာအကျိုးမှလဲ မရှိဘူး ဆိုတာပါပဲ….ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေ ဟာလည်းအတူတူပါပဲ။ ဘာမှသိပ်မကွာခြားလှပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ မွေးဖွားလာတုန်းက ကိုယ်အလွတ်နဲ့လက်ဗလာမွေးဖွားလာကြပြီး…. ပြန်သွားတဲ့ အချိန်ကျတော့လည်း လက်ဗလာနဲ့ ပဲပြန်သွားကြရတာ ပါ။ဘယ်အရာမှ […]
တပေါငျးလ အတှကျ အကောငျးဆုံး စီးပှားတကျယတွာ
တပေါင်းလ အတွက် အကောင်းဆုံးယတြာ တပေါင်းလဆန်း(၁)ရက်နေ့(23.2.2020)မှ တပေါင်းလကွယ်နေ့(23.3.2020)အထိ တစ်လတာလုံး မြတ်စွာဘုရားရှင်အား အုန်းထန်းလျက် ကပ်လှူရမည်။ ဘုရား ဂုဏ်တော်(၉)ပါး ဂါထာအား ပုတီးစိပ်ရမည်။ တပေါင်းလ တစ်လတာအတွင်း ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ ချမ်းသာရပါလို၏။မိမိလိုရာဆုတောင်းနိုင်သည်။ မည်သည့်နေ့နံသားမဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါကြောင်း။ ဤယတြာအစီအရင်သည် အလွန်အစွမ်းထက်ထိရောက် သောကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်မည်ဆိုပါက စီးပွားလာဘ်လာဘပွင့်လန်းပြီးမည်သည့်အခက်အခဲများ မဆို ကောင်ခြင်းမင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေသား။ ၇ရက်သားသမီးများအားလုံး ကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေ ဗေဒင်နှင့်အထူးယတြာပေးပညာရှင် ဆရာပေါက်ကျိုင်း 09776478912 Unicode တပေါငျးလ အတှကျ အကောငျးဆုံးယတွာ တပေါငျးလဆနျး(၁)ရကျနေ့(23.2.2020)မှ တပေါငျးလကှယျနေ့(23.3.2020)အထိ တဈလတာလုံး မွတျစှာဘုရားရှငျအား အုနျးထနျးလကျြ ကပျလှူရမညျ။ ဘုရား ဂုဏျတျော(၉)ပါး ဂါထာအား ပုတီးစိပျရမညျ။ တပေါငျးလ တဈလတာအတှငျး ကိုယျရော စိတျပါ ကနျြးမာ ခမျြးသာရပါလို၏။မိမိလိုရာဆုတောငျးနိုငျသညျ။ မညျသညျ့နနေံ့သားမဆိုလုပျဆောငျနိုငျပါကွောငျး။ ဤယတွာအစီအရငျသညျ […]